လှမ်း ၀င့် လို့ ချီ ခေ တ် သစ် ဆီ သို့: 20100909
ရွေးကောက်ပွဲသဘောတူညီချက် ဖောက်ဖျက်သည်ဆိုခြင်းကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ငြင်းဆို
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း အား ပါတီရုံးခန်းတွင် တွေ့ရစဉ်။
မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုတည်း၌ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ၏ ပါတီအသီးသီးမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ယှဉ်ပြိုင် အရွေးခံခြင်းမပြုကြရန် အခြားသော ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့် အလွတ်အားဖြင့် သဘော တူညီထားသည်ကို ၎င်းတို့ပါတီက ချိုးဖောက်သည်ဟူသော ပြစ်တင် ပြောဆိုချက်များအား အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ (အင်န်ဒီ အက်ဖ်)ဥက္ကဋ္ဌက ငြင်းဆိုလိုက်သည်။
စည်းရုံးခွင့်ပေးထားသောအချိန်နှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ စာရင်း တင်သွင်းရန် အချိန် တိုတောင်းမှုကြောင့် အချို့မဲဆန္ဒနယ်များ၌ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်ထပ်ခြင်းမျိုး 'မလွှဲမရှောင် သာ' ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်၌ မြန်မာတိုင်း(မ်)က တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာတွင် ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းက ပြောသည်။
အင်န်ဒီအက်ဖ်ပါတီက ထောက်ခံမှု ရအောင် စည်းရုံးဆောင်ရွက်နေသည့် အချို့မဲဆန္ဒနယ်များတွင်ဝင်မပြိုင်ကြရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ သော်လည်း ထိုမေတ္တာရပ်ခံချက်ကို လျစ်လျူရှုကြသည့် အချို့သော ပါတီများ (မည်သူမည်ဝါဟူ၍ကား အမည်ထုတ်မပြော)၏ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ပုံကို စိတ်ပျက်မိကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောသည်။
"ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင်ဗျာ၊ တချို့မဲဆန္ဒနယ်တွေကို သူတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ ချန်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က ကျွန်တော်တို့စကားကို မနာယူဘူး။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ အင်အားတောင့်တင်းတဲ့၊ ကျွန်တော်တို့အတွက် အလွန် အရေး ပါတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဝင်ပြိုင်မယ့် နေရာမှာဝင်ပြိုင်ကြတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ ဌာနချုပ်ရုံးလည်းဖွင့်ထားတဲ့နေရာ၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ရုံးခွဲသွားဖွင့်ထားပြီး မိန့်ခွန်းပြောခဲ့တဲ့နေရာမှာ ပြိုင်ကြတာဗျာ"ဟုလည်း ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း က ဆက်ပြောသည်။
"ကျွန်တော်တို့က အဲဒီလိုမြို့နယ်မှာ ရှောင်ပါလို့ ပြောတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ဒီနေရာကိုလာရင် ခင်ဗျားတို့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အတွက် ရွေးချယ်စရာ မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် တခြားနေရာမှာ သွားပြိုင်ပါလို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ သူတို့ရွေးချယ်ပြိုင်နိုင် မယ့်နေရာ တွေကို အများကြီးချပြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က လက်မခံဘဲ ရွေးကောက် ပွဲကော်မရှင်ရုံးကိုသွားပြီး မှတ်ပုံတင်ကြ တယ်"ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ပါတီအတွင်း၌ 'အလွတ်တမ်း သဘောတူညီချက်' ရှိခဲ့သည်မှန်သော် လည်း ပါတီများ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်စာရင်းတင်ရန် အချိန်တိုတောင်း သောကြောင့် အဆိုပါကိစ္စများအား နက်နက်နဲနဲ ဆွေးနွေးနေရန် နည်းလမ်း မရှိခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
"ဆွေးနွေးဖို့က မဖြစ်တော့ဘူး။ ကျွန်တော်တို့က လျှောက်လွှာတွေ တင် လိုက်ရတော့တယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်တို့ လူတွေကို 'နေကြပါဦးဗျာ၊ ဆိုင်းထားပါဦး။ ကျွန်တော် ဘယ်ပါတီနဲ့ ဒီမဲဆန္ဒနယ်မှာ ဘယ်သူ ပြိုင်သင့်တယ်ဆိုတာ ဆွေးနွေးနေတုန်း ပါ'လို့ ဘယ်လိုပြောလို့ဖြစ်ပါ့မလဲ။လက်တွေ့က လုပ်လို့မရဘူးလေ။ ဒါဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး"ဟု ဒေါက်တာ သန်းငြိမ်းက ပြောသည်။
သို့ပင်ဖြစ်သော်လည်း ဤပြဿနာကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ပါတီများဟု ဆိုနိုင်သည့် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ) ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီပါတီနှင့် မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းပါတီတို့အတွင်း ဆက်ဆံရေးပျက်မသွားသင့်ကြောင်းလည်း ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းက ပြောသည်။
အင်န်ဒီအက်ဖ်သည် ဩဂုတ်လ ၃၀ နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်တွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၁၆၁ ဦး စာရင်းတင် ထားသည်။
ဤအရေအတွက်သည် မိမိတို့ပါတီက မျှော်မှန်းထားသည့်အရေအတွက်ထက် ပိုသော်လည်း စာရင်းတင်ရာ၌ မပါလိုက်သော ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အနည်းငယ် ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း လည်း ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းက ပြောသည်။
"ကျွန်တော်တို့က ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုပဲ အာရုံ စိုက်ထားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် လွှတ်တော်တွေဟာ ဥပဒေပြုနိုင်တဲ့၊ ပိုပြီး အာဏာရှိတဲ့ လွှတ်တော်တွေ ဖြစ်လို့ပါပဲ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ တိုင်းဒေသ ကြီးလွှတ်တော်တွေအတွက် ငွေကြေး ရော၊လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရော အလုံအလောက် မရနိုင်ဘူးလေ"
အင်န်ဒီအက်ဖ်၏ လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်လောင်း အများစုသည် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မကွေး၊ ဧရာဝတီနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တို့တွင် ယှဉ်ပြိုင် သွားမည်ဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် စစ်ကိုင်းနှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးများနှင့် ကချင်၊ ချင်း၊ မွန်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တုိ့ တွင်လည်း အနည်းငယ် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် မည်ဖြစ်သည်။
"တခြား ပါတီကြီးဆိုတာတွေနဲ့ စာရင်တော့ ဒီအရေအတွက်ဟာ ဘာမှမဖြစ် လောက်ပါဘူး"ဟု ၎င်းကပြောသည်။
"ကျွန်တော်တို့က အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်မယ့် အနေအထားမရနိုင်ပေမယ့် ဒီအရေအတွက်ဟာလည်း လာမယ့် လွှတ်တော်မှာ အတော် အတန်အင်အား ရှိလာနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ပါတယ်"။
ရင်းမြစ်။ ။ myanmar time
Posted by ခေတ်သစ် at 8:00 PM0comments
ရပ်ကွက်လဘက်ရည်ဆိုင်က ရန်ပွဲကို ဖြေရှင်းလိုက်တာ စက်မှုတက္ကသိုလ်ဝင်းထဲက အဆောင်ကျောင်းသားတွေ သေနတ်ဒဏ်ရာရလို့ သေသူသေ၊ ဒဏ်ရာရသူရ၊ွ-ံေူ အဆောင်က ကျောင်းသူတွေလဲ မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေ ဒဏ်ခံရ ဆိုတဲ့ သတင်းဟာ အဆောင်ပိတ်လိုက်လို့ နေရပ်မပြန်ခင် အိမ်မှာ စတည်းချတဲ့ အဆောင်သူ သူငယ်ချင်းဆီက ကြားခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်စုံပါပဲ၊ ထုံးစံအတိုင်း အစိုးရသတင်းဌာနတွေမှာတော့ အမှန်ခပ်ပါးပါး သုတ်ထားတဲ့ ၀ါးတားတားသတင်းတွေ ထုတ်ပြန်ပြီး အကန့်အသတ်မရှိ ရက်ရှည် ကျောင်းတွေ ပိတ်လိုက်တော့တာပေါ့။
သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ကျမတယောက် ဆေးရုံကြီးတရုံရဲ့ ခပ်မှောင်မှောင် ကော်ရစ်ဒါတွေကို ခပ်သွက်သွက် ဖြတ်ပြီး လျှောက်နေတယ်။ ၀ဒ်တွေ တခုပြီး တခုပြီးအခန်းတွေ တခန်းပြီး တခန်း ဖြတ်
လျှောက်နေရတာဟာ ကျမအတွက် ကမ္ဘာတွေ တကမ္ဘာပြီး တကမ္ဘာ ဖြတ်လျှောက်နေရသလို ခံစားနေရတယ်။ လက်ထဲမှာ ကိုင်လာတဲ့ မုန့်ပုံး ၂ ပုံး ဟာလည်း ဧရာမကျောက်တုံးကြီး ကို ဆွဲထားရသလို လက်အံသေမတတ် ခံစားလာရတယ်။ ကျမ တကိုယ်လုံးဟာလည်း ကြောက်လွန်းလို့ ချွေးတွေ ရွှဲနစ်နေတယ်။
အဲဒီဆရာမကလည်း သင်ကြားရေးမှာ ကောင်းမှ ကောင်း၊ သူသင်ပြီ ဆို ရှင်းကနဲ၊ လင်းကနဲ ဖြစ်လွန်းလို့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေ သိပ်ကြိုက်ပေါ့။ ရုတ်တရက် ကျမက လှမ်းမေးတော့ ဗိုလ်မှူးကြီးရဲ့ သေနင်္ဂဗျူဟာဇာတ်လမ်းတွဲမှာ မြောနေတဲ့ ဆရာမလည်း ဆတ်ကနဲ တုန်သွားတယ်။ ပြီးတော့မှာ အတော် ကြာကြာ စဉ်းစားလိုက်ပြီး … “ငါ့အထင်တော့ ဒူးအထက် ပေါင် …” တဲ့။ ဒါပေမယ့် သူကလည်းေ၀၀ါးဝါးရယ်။ သူ့နားက ဆရာမကို ထပ်မေးလိုက်ပြန်တယ်။ ဒီတော့မှ ပိုရှုပ်ကုန်ရော။ သူက ဓလည်မျိုရဲ့ အပေါ် ...ဓ ဖြစ်လိမ့်မယ် တဲ့။ ဒါနဲ့ ကျမ စ လိုက်တဲ့ ညို့သကျည်းဇာတ်လမ်းကြောင့် နောက်ဖက်က ဆရာ၊ ဆရာမတွေ အကုန် အတွေးရှုပ်၊ ခေါင်းရှုပ်နဲ့ ရှုပ်သွားလိုက်ကြတာ သေနင်္ဂဗျူဟာဇာတ်လမ်း ဘယ်နား ဆုံးသွားမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ ကျမတို့ရဲ့ ညို့သကျည်းဇာတ်လမ်းကတော့ နောက်နေ့ ဆက်ရန် ဖြစ်သွားတယ်။ တကယ်တော့ ကျမဟာ တန်းကနဲ ထပြီး မေးလိုက်သင့်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကြောက်တာကိုး။
Posted by ခေတ်သစ် at 3:57 PM0comments
ငွေအကြွေတွေဘယ်မှာလဲ . . .
ဟောင်းနွမ်းငွေစက္ကူ အကြွေများကို တန်ဖိုးတူချင်းလဲလှယ်ပေးမှုအား ၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့မှ စတင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ တစ်နှစ်ပြည့်သည့်အချိန်တွင် ကျပ်သိန်းပေါင်း ၁၅၀၀၀ ကျော်အထိ လဲလှယ်ပေးပြီး ဖြစ်ကြောင်း သတင်းသိရှိရပါသည်။
ထိုသို့ ငွေအကြွေပမာဏ သိန်းပေါင်းများစွာ လဲလှယ်ပေးပြီးဖြစ်သော်လည်း ဈေးရောင်းဝယ်မှုများ၊ ယာဉ်လိုင်းများစသည်ဖြင့် အများပြည်သူကြားတွင် ငွေအကြွေအခက်အခဲမှာ သိသိသာသာ လျော့နည်းသွားမှု မရှိသေးဘဲ ငွေအကြွေ အတွက် အစားထိုး အသုံးပြုမှုများ ရှိနေသေးကြောင်း သိရသည်။
လတ်တလောတွင် ငွေအကြွေအတွက် ရှော့ပင်းစင်တာကြီးအချို့၊ စားသောက်ဆိုင်အချို့၌ပင် အကြွေ အစားထိုး ကူပွန်ကတ်များအသုံးပြုလာကြောင်း၊ အခြားဆိုင်သေးများတွင်လည်း ငွေအကြွေအတွက် အလျဉ်းသင့်သလိုပြု လုပ်နေသေးကြောင်း သိရသည်။
နေ့စဉ် မဖြစ်မနေ ၀ယ်ယူသုံးစွဲရတဲ့ဈေးထဲက ကုန်ပစ္စည်းအများစုက ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်ပေါ်မှာ တွက်ချက်တဲ့အပြင် ရောင်းသူဝယ်ကြားမှာ အကြွေအမ်းနိုင်၊ မအမ်းနိုင်ကိုပါ ထည့်တွက်ထားတဲ့ ဈေးတွေဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါကမလိုအပ်ဘဲ ဈေးတက်တာ၊ နောက်တစ်ခုက ကား စီးတယ်၊ ကျပ် ၁၀၀ ကျန်တာကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မအမ်းနိုင်တဲ့အတွက် မတတ် သာလို့ထားခဲ့ရတာ။ ဈေးဝယ်ရင် ပြန်မအမ်းနိုင်လို့ ပြီးရောဆိုပြီး ၀ယ်လိုက်ရတာတွေက မလိုအပ်ဘဲသုံးစွဲလိုက် ရတာတွေပါ ..
သောက်သောက်လဲ လဲပေးထားတယ် . . .
အများပြည်သူ လက်ဝယ်၌ရှိသော ဟောင်းနွမ်းငွေစက္ကူ ၁၀ ကျပ် တန်၊ ၂၀ ကျပ် တန်၊ ၅၀ ကျပ်တန်၊ ၁၀၀ ကျပ်တန်နှင့် ၂၀၀ ကျပ်တန် စသည်ဖြင့် ငါးမျိုးအား ပမာဏအကန့် အသတ်မရှိ၊ လဲလှယ်ပေးသည့်ရက် အကန့်အသတ်မရှိ အစီအစဉ်ဖြင့် လဲလှယ်ပေးခဲ့သည့် အစီအစဉ်မှာသြဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့က တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၃ ရက် နေ့မှစတင်၍ လဲလှယ်ပေးစဉ်ကပမာဏ နှင့် လဲလှယ်ရမည့်ရက်ကို ကန့်သတ်ထားသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ပမာဏ နှင့် လဲလှယ်ရမည့်ရက် အကန့်အသတ်မထားဘဲ လဲလှယ်ခွင့်ပေးခဲ့ ကြောင်း၊ ယခုအခါ တန်ဖိုးတူခြင်း လဲလှယ်ပေးမှုတစ်ခုတည်းပင် ကျပ်သိန်းပေါင်း ၁၅၀၀၀ ကျော်အထိရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဟောင်းနွမ်း ငွေစက္ကူများကို တန်ဖိုးတူ လဲလှယ်ပေးခြင်းအပြင် မထသယာဉ်လိုင်းများသို့ တစ်ပတ်လျှင် ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဖိုး၊ ဈေးများသို့ တစ်ပတ်လျှင် ကျပ် ၅၁ သိန်းဖိုး ငွေအကြွေ လဲလှယ်ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ရှော့ပင်းစင်တာများသို့လည်း ငွေအကြွေများကို တန်ဖိုးတူလဲလှယ်ပေးခြင်းများ ရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
အများပြည်သူကြား ရှားနေသေးတဲ့ အကြွေ . . .
သို့သော် ယာဉ်လိုင်းများတွင် ငွေအကြွေအား အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ လဲလှယ်၍ရပြီး တစ်စီးလျှင် တစ်ပတ် လုံးမှ ကျပ် ၁၀၀၀ သာ လဲလှယ်ရရှိသည့် ယာဉ်များရှိနေသည်ဟု သိရသည်။
"ယာဉ်လိုင်းတွေကို တစ်ပတ် ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ထိတိုးပေးထား တယ်တဲ့။ အင်္ဂါတစ်ရက်ပုံမှန်လာလဲ ပေးတယ်။ တစ်ခါလဲရင် ၁၀၀၀ ကျပ် ဖိုးလဲလို့ရတယ်။ အဲဒါ တစ်ပတ်လုံးစာပဲ။ ကျွန်တော်ကလည်း တစ်ပတ် လုံး ဒီအကြွေ ၁၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ဘယ်လိုလုပ် အလုပ်ဖြစ်မှာလဲ"ဟု ယာဉ်အကူ တစ်ဦးက ရှင်းပြခဲ့သည်။
"ဒီလို လဲလှယ်ပေးတဲ့အခါမှာလည်း တကယ်လိုအပ်တဲ့သူ လက်ထဲ ရောက်မရောက် စိစစ်သင့်တယ်။ အခု ဘဏ်ကနေ ထုတ်ပေးလိုက်တာက အများကြီးဈေးကွက်ထဲကို ရောက်မလာ ဘူး။ အဲဒီအတွက် ကျပ် ၁၀၀၀၀ ဖိုး လဲရင် ကျပ် ၈၀၀၀ ပဲပေးတဲ့ဈေးကွက် ဖော်နေသလား၊ ဒါမှမဟုတ်အကြွေလို အပ်ချက်ကပဲ မြင့်တက်နေတာလားဆိုတာလည်း ထည့်တွက်သင့်ပါတယ်"ဟု စတိုးဆိုင်လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးကလည်း ရှင်းပြခဲ့သည်။
ငွေအကြွေဘယ်ရောက် . . .
လဲလှယ်ပေးသည့် ငွေပမာဏ များပြားလေ အများပြည်သူကြား ငွေအကြွေပြဿနာနှင့် ငွေအကြွေ၏ သက်ရောက်မှုများလျော့ပါးလေ ဖြစ်ရမည်ဆိုသော်လည်း လက်ရှိအချိန်ထိ သိသိသာသာပြေလည်ခြင်းမျိုး မရှိသေးကြောင်း ပြည်သူများကဆိုသည်။
"ကျွန်မတို့ နေ့တိုင်းဈေးဝယ်ရ တယ်။ နေ့တိုင်းပဲ အကြွေအတွက်မလိုဘဲ ကုန်ကျနေရတာတွေရှိတယ်။ ကျပ် ၁၀၀၀ တန်ပေးတယ်၊ ကျပ် ၈၅၀ ကျ တယ်။ ကျပ် ၁၅၀ပြန်အမ်းစရာမရှိလို့ ငရုတ်သီးလေးယူ၊ ကြက်သွန်ဖြူလေး ယူနဲ့ ပြီးခဲ့ရတဲ့ရက်တွေများပါတယ်။ တစ်ရက်ကိုဈေးနှစ်ခါဝယ်မိရင် ကျပ် ၃၀၀ လောက်တော့ မလိုအပ်ဘဲသုံး လိုက်ရတယ်။ အရင်ကတစ်ရက်ကို ကိုယ့်ဝင်ငွေနဲ့ကျပ် ၁၅၀၀ ပဲသုံးမယ်ဆို ကျပ် ၁၅၀၀ ပဲသုံးလို့ရတယ်။ အခုက နေ့စဉ်အသုံးစရိတ်မှာအကြွေအတွက် ပါ ထည့်တွက်နေရတယ်။ လိုင်းကား စီးရင်လည်းလူတိုင်းသိတယ်။ အကြွေ ပေးနိုင်ရင်ပေး၊ မပေးနိုင်ရင် ကျပ် ၁၀၀ ထားခဲ့ရတာပဲ။ ရှော့ပင်းစင်တာဈေး သွားဝယ်ရင်လည်း ကူပွန်ပဲရတယ်။ အဲဒီကူပွန်က အဲဒီဆိုင်မှာပဲ ပြန်ဝယ် လို့ ရတာလေ။ လမ်းကြုံလို့ဝယ်မိတဲ့ ကျွန်မတို့အတွက်ကတော့ အဆုံးပဲ ထားရလိုက်သလိုပါပဲ။ ဒါတွေကမလို အပ်ဘဲပိုသုံးနေရတာတွေပါ"ဟု အင်းစိန် မြို့နယ်နေ အိမ်ရှင်မတစ်ဦးကလည်း ရှင်းပြခဲ့သည်။
"ဘဏ်တွေက လဲပေးတာမှန်ပေ မယ့် အခုထိတော့ အကြွေအခက်အခဲ ရှိနေတုန်းပဲ။ ဈေးထဲမှာပဲကြည့်ကြည့်၊ လိုင်းကားပေါ်မှာပဲ ကြည့်ကြည့်ပါ သိနိုင်ပါတယ်"ဟု ရန်ကုန်မြို့နေ ရုံး ၀န်ထမ်းတစ်ဦးကလည်း ဆိုသည်။
သကြားလုံး၊ တစ်ရှုး၊ ကော်ဖီမစ်ပြီးတော့ ထပ်ပေါ်လာတဲ့ ကူပွန်အကြွေ . . .
သကြားလုံး၊ တစ်ရှုး၊ ကော်ဖီ မစ်များကို ငွေအကြွေအဖြစ်ပြန်အမ်းခြင်းအပြင် ယခုအခါတွင် ၁၀၀ ကျပ်၊ ၅၀ ကျပ်တန်များအတွက် ကူပွန်ကတ် များအဖြစ်ပင် အသုံးပြုလာကြသည်ဟု အများပြည်သူတို့က ဆိုသည်။
"အရင်က သကြားလုံး၊ တစ်ရှုး တွေကိုအမ်းတယ်။ နောက် ကော်ဖီမစ် အမ်းတယ်။ အခု ကူပွန်ပုံစံ အမ်းတာ ပါရှိလာတယ်။ ဥပမာ စိန်ဂေဟာစူပါ မားကတ်ဆိုရင် ၁၀၀ ကျပ်၊ ၅၀ ကျပ် ကူပွန်စာရွက်နဲ့ ပြန်အမ်းပေးတာမျိုး ကို အသုံးပြုနေရတယ်။ ယာဉ်စီးခပေးတဲ့အခါမှာလည်း ယာဉ်အကူကလည်း ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်နေပါစေ ကျပ် ၁၀၀၊ ကျပ် ၂၀၀ မှန်း ကွဲကွဲပြားပြား သိရင် တော်ပြီယူတာပဲ။ သူပြန်အမ်းတဲ့အခါမှာလည်း ဘယ်သူကမှ အစုတ်ကြီး၊ တိပ်တွေချည်းပဲလို့ မပြောဘူး၊ ခရီးသည်က အသာတကြည်ယူတာပဲ။ ဒီလို အဟောင်းအနွမ်းလေး ပြန်အမ်းတာကိုတောင် ကျေးဇူးတင်သေးတာ၊ မဟုတ်ရင် စပယ်ယာကလည်း မအမ်းတော့ဘူးလေ"ဟု ရန်ကုန်မြို့နေပြည်သူ တစ်ဦးကဆိုသည်။
"ယုဇနပလာဇာမှာရှိတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆိုလည်း တစ်ရက်အတွင်းသာ အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ ရေးထားတဲ့ ၁၀၀ ကျပ် ကူပွန်အကြွေတွေ ပြန်အမ်းလာတယ်။ ဆိုလိုတာက အကြွေအမ်းနည်းအမျိုးမျိုးထဲမှာ ကူပွန် အကြွေပါပါလာတယ်လို့ ပြောချင်တာပါ"ဟု လှိုင်မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူ တစ်ဦးကလည်း ရှင်းပြခဲ့သည်။
ငွေအကြွေဘယ်ထိသက်ရောက်လဲ . . .
ငွေအကြွေ၏ ထင်ထင်ရှားရှား သက်ရောက်မှုကိုပြပါဆိုလျှင် မလိုအပ်ဘဲ ကုန်စည်ဈေးနှုန်းမြှင့်လိုက်ရခြင်းနှင့် စားသုံးသူများ မလိုအပ်ဘဲ ၀င်ငွေနှင့်မကိုက်သည့် ပမာဏသုံးစွဲ နေရခြင်းဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်ကြသည်။
"သက်ရောက်မှုကတော့ အများ ကြီးပါ။ လက်တွေ့ပြလို့ရတာကတော့ ကျပ် ၈၃၀ တန် ဆန်တစ်ပြည်ဆို ပါတော့ အကြွေခက်ခဲလို့ တစ်ပြည် ကျပ် ၉၀၀ အတိအကျနဲ့ တင်ရောင်းရတာမျိုး၊ ၉၀၀ ကျသင့်တာကိုကျတော့ အကြွေ ၁၀၀ မရှိလို့ ကျပ် ၁၀၀၀ အတိနဲ့တင်လိုက်ရတာမျိုး လူတိုင်းမှာ ရှိလာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နေ့စဉ် မဖြစ်မနေ ၀ယ်ယူသုံးစွဲရတဲ့ဈေးထဲက ကုန်ပစ္စည်းအများစုက ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်ပေါ်မှာ တွက်ချက်တဲ့အပြင် ရောင်းသူဝယ်ကြားမှာ အကြွေအမ်းနိုင်၊ မအမ်းနိုင်ကိုပါ ထည့်တွက်ထားတဲ့ ဈေးတွေဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါကမလိုအပ်ဘဲ ဈေးတက်တာ၊ နောက်တစ်ခုက ကား စီးတယ်၊ ကျပ် ၁၀၀ ကျန်တာကိုဘယ်လို နည်းနဲ့မှမအမ်းနိုင်တဲ့အတွက် မတတ် သာလို့ထားခဲ့ရတာ။ ဈေးဝယ်ရင် ပြန်မအမ်းနိုင်လို့ ပြီးရောဆိုပြီး ၀ယ်လိုက်ရတာတွေက မလိုအပ်ဘဲသုံးစွဲလိုက် ရတာတွေပါ။ အကြွေသက်ရောက်မှုကတော့ လက်တွေ့ပြရင် ဒီနှစ်ချက်က ထင်ထင်ရှားရှားပါပဲ"ဟု ကုန်စည်မျိုးစုံ ရောင်းချနေသူတစ်ဦးကလည်း ရှင်းပြ ခဲ့သည်။
"မလိုအပ်ဘဲ နေ့စဉ်ငွေပိုသုံးနေ ရတယ်။ ဆီတစ်ပိဿာ ကျပ် ၂၂၃၀ ကျတယ် ဆိုပါတော့၊ အကြွေမရှိလို့ ကျပ် ၂၃၀၀ ပေးလိုက်ရသလို၊ နောက် ပိုင်းဆီဆိုင်ကလည်း အကြွေအခက် အခဲကြောင့်ဆိုပြီးကျပ် ၂၃၀၀ ကို ပုံမှန် သတ်မှတ်လိုက်ရတယ်။ ဒါက ဥပမာ တစ်ခုပဲ ရှိသေးတယ်။ ကုန်စည်မျိုးစုံ ဒီအတိုင်းဖြစ်နေတာပါ။ ကျွန်မ လခနဲ့ ဆိုရင် တစ်ရက်ကို ၁၅၀၀ ထက် ပို သုံးလို့မရဘူး။ ဒါပေမယ့် မလိုအပ်ဘဲ တစ်ရက်ကိုပိုသုံးနေရတာ ကျပ် ၃၀၀၊ ကျပ် ၄၀၀ အထက်မှာရှိနေတယ်။ ဒါ ကြောင့် ကုန်ဈေးနှုန်းတွေတက်တဲ့ အချက်မှာ အကြွေပြဿနာကလည်း အရေးပါနေပါတယ်"ဟုကျောင်းဆရာမ တစ်ဦးကလည်း ရှင်းပြခဲ့သည်။
ငွေအကြွေလဲလှယ်ပေးမှု အား မကောင်းခဲ့သည့် အချိန်တွင် စားသုံးသူများအကြား အကြွေရှားပါးခြင်းဆို သည်မှာ ယုတ္တိတန်သည်။ သို့သော် ငွေအကြွေလဲလှယ်ပေးမှုအားကောင်း သည့်အချိန်၊ ပမာဏများစွာလဲလှယ် ပေးပြီးဖြစ်သည်ဟူသောအချိန်မျိုးတွင် ငွေအကြွေ ယခင်ကနည်းတူ ရှားပါးနေဆဲမှာမူ ယုတ္တိတန်သည်ဟု ပြော၍ မရကြောင်း ပြည်သူများကြား သုံးသပ်ကြသည်။
ထို့အတွက် ယခုလဲလှယ်ပေးသည့် ပမာဏနည်းပါးနေသေး၍ အမှန် တကယ် ငွေအကြွေရှားပါးခြင်းလား၊ သို့တည်းမဟုတ် လဲလှယ်ပေးသည့် ငွေအကြွေများ စားသုံးသူဈေးကွက် အတွင်းရောက်ရှိရန် ကျပ် ၁၀၀၀၀ ဖိုး လဲလျှင် ကျပ် ၈၀၀၀ ရမည်ဟူသော အချက်များကြောင့် နှောင့်နှေးနေခြင်းလား ဆိုသည်ကို စိစစ်သင့်ပြီး ထိရောက်သည့် လဲလှယ်ပေးမှုမျိုးအပေါ် အများပြည်သူက မျှော်လင့်နေကြသည်။
Posted by ခေတ်သစ် at 12:00 PM0comments
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမရုပ်တု ဂါရ၀ပြုခွင့်မရ
ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ ပျံလွန်တော်မူသည့် ၇၁ နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီက စစ်တွေ ဦးဥတ္တမ ရုပ်တုရှေ့တွင် ဂါရ၀ပြုခွင့် တောင်းခံခဲ့ရာ စစ်တွေရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက ခွင့်မပြုကြောင်း သိရသည်။
“ကျနော်တို့ ဒီလ ၂ ရက်နေ့က ဆရာတော် ဘုရားရဲ့ ရုပ်တုရှေ့မှာ ပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင် ၉ ဦးက ငြိမ်သက်စွာ ဂါရ၀ပြုခွင့်ပေးဖို့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို တောင်းပါတယ်၊ ၇ ရက်နေ့မှာတော့ ခွင့်မပြုတဲ့ အကြောင်းပြန် ခဲ့ပါတယ်"ဟု ပါတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာ အေးမောင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ အကြောင်း ပြန်စာတွင် စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီအချိန်တွင် ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီဝင် ၉ ဦးက ဦးဥတ္တမ ခန်းမရှေ့ရှိ ဦးဥတ္တမ ရုပ်တုအား လာရောက် ဂါရ၀ပြုရန် တင်ပြချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုပါ နေရာသည် နိုင်ငံရေး ပါတီများ ဟောပြောစည်းရုံး မဲဆွယ်ရန် မသင့်သည့် လုံခြုံရေးအရ ကန့်သတ်ဧရိယာဖြစ် ခြင်းကြောင့် ခွင့်မပြုပါဟူ၍ ရေးသား ဖော်ပြထားကြောင်း သိရသည်။
စစ်တွေ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ အကြောင်းပြန်ကြားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒေါက်တာအေးမောင်က“ဒီအကြောင်းပြချက်ဟာ ဆီလျော်မှု မရှိပါဘူး ၊ကျနော်တို့က ဟောပြောစည်းရုံးမှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး ၊ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမနေ့ကို လုပ်ခွင့်မပြုတာ တော်တော်ကြာပါပြီ ၊ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကို ဦးတည်နေပါပြီလို့ ဆိုထားတဲ့အတွက် တမျိုးသားလုံး လွတ်လပ်ရေး မျက်စိကို ဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ကို ဂါရ၀ပြုခွင့် တောင်းခဲ့တာပါ ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဆရာတော်ရဲ့ ရုပ်တုနဲ့ ပန်းခြံဟာ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေရဲ့ ငွေကြေးတွေပါ ၊ အခုတော့ စည်ပင်က ပိုင်သွားပြီနေမှာပေါ့ဗျာ"ဟု ဆိုသည်။
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသည် ၁၈၇၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့၌ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ ရှိ ရူပရပ်တွင် ဖခင် ဦးစံ မြ နှင့် မိခင် ဒေါ်အောင်ဖြူတို့မှ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ငယ်နာမည် မောင်ပေါ်ထွန်းအောင် ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်သည် ငယ်ရွယ်ချိန်အခါကတည်းက ပညာရေးထူးချွန်ခဲ့ပြီး အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်တွင် မိဘများက ရှင်သာမဏေ ၀တ်ပေးရာ ရှင်ဥတ္တမ ဘွဲ့အမည် တွင်ခဲ့သည်။
အသက် ၁၉နှစ်တွင် ရဟန်းပြုပြီးနောက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကာလကတ္တားမြို့သို့ ရဟန်းဝတ်နှင့်ပင် သွားရောက်ခဲ့ရင်း နိုင်ငံ ရေးစိတ်၊ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်များ နိုးကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဆရာတော်သည် ၁၉၂၀ ခုနှစ် တွင် ဗမာတပြည်လုံးသို့ လှည့်လည်ကာ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး တရားများကို ဟောပြောခဲ့ သည်။ ထိုသို့ ဟောပြောမှုဖြင့် ၁၉၂၀ မတ်လ တွင် အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ်၁၂ လ အပြစ်ပေးခံရသည်။
ဆရာတော်သည် ၁၉၂၄တွင်လည်း“အစိုးရမကောင်းလျှင်မကောင်းဟု ဝေဖန်ခွင့်ဟာ လူ့အခွင့်အရေးပဲ၊ ဒီအခွင့်အရေးဟာ ငါတို့မှာ ရှိတယ်၊ ငုံ့မခံကြနဲ့” ဟု ပြည်သူများကို လှုံ့ဆော်ဟောပြောခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့် ဒုတိယ အကြိမ် ထောင် ၃ နှစ် ကျခဲ့ပြီး ၁၉၂၈ တွင် တတိယအကြိမ် အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။
ထိုအချိန်က ဗြိတိသျှအစိုးရ ဘုရင်ခံချုပ်ကိုလည်း “ဆာ ရယ်ဂျီနယ် ကရက်ဒေါက် မင်းဗမာပြည်မှထွက်သွားပါ” ဟူသော စာကိုရေးသားပေးပို့ခဲ့သည်။
ဆရာတော်သည် ၁၉၃၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ပျံလွန်တော်မှုခဲ့ပြီး ပျံလွန်တော်မှုချိန်တွင် သက်တော် ၆၀ နှစ်၊ ဝါတော် ၄၁ ၀ါ ဖြစ်သည်။ ဆရာတော် ပျံလွန်ချိန်အထိ နယ်ချဲ့အစိုးရကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း ဦးဆောင်သော တော်လှန်ရေးကောင်စီ အစိုးရ တက်လာပြီး နောက်ပိုင်းမှစ၍ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမနှင့် စပ်လျဉ်းသော အခမ်းအနားများ ပြည်တွင်း၌ ကျင်းပခွင့်မရတော့သည်မှာ ယနေ့တိုင်ဖြစ်သည်။
Posted by ခေတ်သစ် at 1:51 AM0comments
ရွေးကောက်ပွဲသဘောတူညီချက် ဖောက်ဖျက်သည်ဆိုခြင်းကို အ...